के तपाईंलाई अरुभन्दा बढी जाडो हुन्छ ? कतै यो रोगको लक्षण त होइन ? – साँचो खबर
के तपाईंलाई अरुभन्दा बढी जाडो हुन्छ ? कतै यो रोगको लक्षण त होइन ?
Previous: आजको विनिमयदर : कति पुग्यो डलरको मुल्य ?
Next: पश्चिमी वायुको प्रभाव : कस्तो रहने छ आजको मौसम ?